XOG: Maxay ka wada hadleen Cumar Filish iyo Xildhibaanada baarlamaanka Federaalka ee Beesha Hawiye.
MUQDISHO(P-TIMES) – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Fillish) ayaa xalay kulan casho ah u sameeyay Xildhibaanada labada Gole ee ka soo jeeda Beelaha Hawiye, kulankan ayaa ujeedkiisa ahaa sidii looga wada shaqeyn lahaa amniga Caasimadda Muqdisho, horumarkeeda iyo aayaheeda mustaqbalka, waxaana la isku dhaafsaday tallooyin kala duwan.
Kulanka intii uu socday, waxaa lasoo jeediyey hadalo badan oo la xariira arrimaha maqaam u sameynta magaalada Muqdisho, isla markaasna ay soo jeediyeen xubnaha mucaaradka ee xildhibaanada labada golle ee kasoo jeeda beesha Hawiye.
Qaar ka mid ah Xildhibaannada ayaa tallooyin kala duwan u soo jeediyay Guddoomiyaha oo la xiriiray amniga iyo sidii jidadka xiran loo furi lahaa, si shacabka looga qaado culeyska, isla markaana lala yimaado istiraatiijiyad amni.
Mudanayasha baarlamaanka ee kasoo jeeda Beesha Hawiye, waxay marar badan ku eedeeyaan Madaxweynaha Soomaaliya in uu doonayo in uu awood xoog ku sii joogo, sidaas oo kalena maqaamka caasumada ayaa kamid ah arrimaha waa weyn ee ay ka hadlaan, kulanka caawa ayayna kamid ahayd qodobadii lagu soo qaaday.
Cumar Filish oo magacaabidiisa la rumeysan yahay in ay ku timi si kedis ah ayaa kulamadiisii ugu dambeeyey ay ka dhigan yihiin in uu isku diyaarinayo sidii u noqon lahaa nin u dhaxeeya Madaxweynaha iyo Mucaaradka beeshiisa, taas oo ahayd door uu lahaa Raysalwasaare Xassan Cali Kheyre.
Kulankan xalay ayaa qeyb ka ahaa kulamo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir la qaadanayay waxgaradka, odayaasha iyo siyaasiyiinta, waxaana ka horeeyay kulan labo habeen ka hor Guddoomiyaha oo ay wehliyeen Duubabka dhaqanka Beesha Muddullood la qaateen Madaxweyne Farmaajo.
Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa rumeysan in Cumar Filish uu ka saameyn badan doonin Wasiirka koowaad ee Xukuumadda Xassan Cali Kheyre, oo marar badan si cad u diiday talaabo kasta oo ay dhinacyada mucaaradka ee beeshiisa soo jeediyeen.
Way ila tahay sidii caadiga u ahaan jirtay madaxda beelaha USC in ay ka wada hadleen XIN iyo XASIDNIMO.Reer puntlaan an xumayno iyo aynuu wax dhino.Haddii aysan ahayn dad waxaas ka hadla maxay gaar ugu shireen ayagoo sheegtay in ay kala yahiin xildhibaano iyo wasiiro dalwadeed?Ayaga ka hor xaggee lagu arkay madax dawladeed oo hab qabiil u shiraysa?Yaa ayana karkay nimankaas ka hor DUQ maagaalo oo shirsada qabiil qabiilkiisa?Nimankaasu qalad weeyn bay ka fahamsan yahiin dawladnimada.
Hab dhaqan fiican ma aha madax dawladeed oo amuuro qabiil isku uruursaday.Ayana kaba sii daran DUQ magaalo oo madaxda labada gole ee qabiilkiisa shir ugu qabtay xarunta dawlada hoose.Waa waxaan horay u soo marin soomaali taariikhdeeda.Horaa loo yiri Fiqi tolkiis kama jano tago.